तिहार तेल, रक्सी र मुटु – Health Post Nepal
तिहार तेल, रक्सी र मुटु
डा. प्रकाशराज रेग्मी वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ
२०७५ कार्तिक २१ गते १३:५२
स्कुले बालबालिकामा मुटुको बाथरोगको प्रभाव
मुटुरोगको उपचारमा अब्बल बन्दै चितवन मेडिकल कलेज
दसैँको मासुसित महँगो रक्सीको चुस्की लिँदै हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस्, एक पेग रक्सीको तपाईंको लिभरमा प्रभाव
के हृदयाघात पीडादायी हुन्छ ?
मलाई धेरै मुटुरोगीले एउटा साझा प्रश्न सोध्ने गर्छन्– कुन खानेतेलले मुटुलाई फाइदा गर्छ ?
धेरै मानिस खानेतेल, कोलेस्टेरोल र अन्य चिल्लो खाद्य पदार्थबारे भ्रममा देखिन्छन् । आजभन्दा केही वर्षअघिसम्म बजारमा मुख्य रुपमा तोरीको तेल मात्र पाइन्थ्यो । धेरैले तोरीकै तेलमा तरकारी पकाएर खाने गर्थे । शुद्ध चाहिँदा र रोटी, पुरी पकाउँदा गाईभैँसीको घिउ प्रयोग हुन्थ्यो । आज बजारमा तोरीलगायत भटमास, सूर्यमुखी, मकै, बदाम, ओलिभ आदि, धेरैथरीका खानेतेल बिक्रीमा छन् ।
उद्योग–व्यापारको प्रोत्साहन गर्ने जमाना छ । तेल उद्योगहरुले नानाथरी आकर्षक विज्ञापन गरेर आ–आफ्ना उत्पादन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ, मुटुलाई स्वस्थ र बलियो बनाउँछ, हर्टअट्याक हुनबाट बचाउँछ, शतप्रतिशत कोलेस्टेरोलविहीन छ आदि सन्देश जनमानसमा पु¥याउने प्रयास गरीराखेका देखिन्छन् । हाल एउटा तोरीको तेल उत्पादक कम्पनीले एकजना पाइलटलाई विज्ञापनमा प्रयोग गरेर ‘साहसी बन्न बलियो मुटु चाहिन्छ र यसका लागि म १५ वर्षदेखि तोरीको तेल खाने गर्छु’ जस्तो गलत र भ्रामक सन्देश प्रसारण गरिरहेको पाइन्छ । यसैगरी सूर्यमुखी तेलमा कत्ति पनि कोलेस्टेरोल हुँदैन, यसकारण यो मुटुका लागि फाइदाजनक छ भन्ने प्रचारबाजी पनि भ्रामक छ । यसकारण तेल र चिल्लोपदार्थको सबैलाई सत्य–तथ्य जानकारी हुनु जरुरी छ ।
छाला भएको मासुमा बोसो र कोलेस्टेरोल धेरै हुन्छ । चिल्लोमा फ्राई गर्दा यो झन् हानिकारक बन्न पुग्छ । यसकारण बोसो, छाला नभएको मासु खाने प्रयास गर्नुपर्छ । उसिनेर वा रोस्ट गरेर पकाउँदा उत्तम हुन्छ । मासु खाँदा हरियो सागपात र सलादसँग खानुपर्छ ।
चिल्ला खाद्य पदार्थ भन्नेबित्तिकै घिउ र तेल बुझिन्छ ।
खाना पकाउन धेरैजसो वनस्पति तेलको प्रयोग गरिन्छ । तेलको वैज्ञानिक नाम ‘ट्राइग्लिसेराइड’ हो । ३ अणु ‘फ्याटी एसिड’ र १ अणु ‘ग्लिसेरोल’ भएको रासायनिक वस्तु हो ‘ट्राइग्लिसेराइड’ । तेलमा ३ प्रकारका फ्याटी एसिड पाइन्छन्– स्याचुरेटेड, मोनो अनस्याचुरेटेड र पोली अनस्याचुरेटेड । स्याचुरेटेड फ्याटी एसिडले मुटुलाई हानि गर्छ भने अनस्याचुरेटेडले केही मात्रामा फाइदा पनि गर्छ । लाभदायी मोनो र पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडले रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ । यस्ता लाभदायी तत्व कुनै तेलमा बढी र कुनैमा घटी हुन्छ । यसबाहेक तेलमा प्रशस्त मात्रमा ट्राइग्लिसेराइड हुन्छ जसले हृदयाघातक कोलेस्टेरोलको उत्पादन बढाउने र मुटुमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ । आमजनतालाई यो कुरा जानकारी नभएको हुनाले तेल उत्पादक उद्योगहरुले यसको फाइदा उठाउने गरेका हुन् ।
विदेशबाट आयात गरिएको सूर्यमुखी तेलको सिसीलाई हेरौँ । त्यसको बाहिर ठूलो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ, ‘शतप्रतिशत कोलेस्टेरोल फ्री’ । कुरा एकदम ठिक हो । कुनै पनि वनस्पति तेलमा कोलेस्टेरोल पाइ्रँदैन । कोलेस्टेरोल जन्तुबाट उत्पादन हुने चिल्लोपदार्थ र घ्यु, मखन आदिमा मात्र पाइन्छ । सूर्यमुखी वा अन्य तेलमा कोलेस्टेरोल पाइँदैन, तर यिनमा ९५ प्रतिशत फ्याटी एसिड पाइन्छ । यो तथ्यलाई गोप्य राखेर कोलेस्टेरोल फ्री भन्ने शब्दलाई जोडतोडका साथ प्रचार गरिएको हुन्छ ।
रक्सीमा ठूलो शक्ति छ, यसले मान्छेलाई पशु बनाउन सक्छ । साथै, मान्छेको शरीरका अंगहरुलाई क्षतविक्षत पार्न सक्छ । रक्सी थोरै खाए औषधि हुन्छ, धेरै खाए विष हुन्छ, ठिक्क मात्रामा लिँदा फाइदा गर्छ भन्ने बहाना बनाई रक्सी पिउने बानी बसाल्नु हुँदैन । रक्सीले रक्तचाप बढाउँछ, मस्तिष्काघात गराउँछ, हार्टफेल गराउँछ ।
चिल्लोपदार्थ चाहे त्यो तेल होस् वा घिउ, शरीरका लागि आवश्यक छ । तेलमा कोलेस्टेरोल हुँदैन, तर अनस्याच्युरेटेड फ्याट बढी हुन्छ । यस्तै, घिउमा कोलेस्टेरोल र स्याच्युरेटेर फ्याट बढी हुन्छ । मुटुका लागि कोलेस्टेरोल र स्याच्युरेटेड फ्याट बढी हानिकारक छन् । यसकारण तेल, अण्डा, घिउ मुटुका लागि बढी हानिकारक छ भनिएको हो । मुटुका लागि तेल फाइदाजनक होइन, तर घिउको तुलनामा तेल कम हानिकारक छ भन्ने मात्र हो ।
चिल्लोपदार्थलाई धेरैपटक तताउँदा त्यसमा ट्रान्स फ्याट उत्पन्न हुन्छ । ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यका लागि धेरै नै हानिकारक छ । यसकारण डिप फ्राई गरेर पकाएका परिकारहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । यसबाट मुटुरोग, क्यान्सर आदि उत्पन्न हुन सक्छन् ।
चिल्लो खाद्य पदार्थमध्ये घिउभन्दा तेल बेस र तेलहरुमा शुद्ध तोरीको तेल सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ, किनकि तोरीको तेलमा गुणकारी तत्वहरु अरुमा भन्दा धेरै मात्रामा पाइन्छन् । यो तेल धेरैपटक तताउँदा पनि ट्रान्स फ्याटमा परिवर्तन हुँदैन ।
चाडपर्वका वेला चिल्लो, बोसो, मासु धेरै खाने चलन छ । मुटुरोगीले यस्तो परिकार खाँदा धेरै विचार पु-याउनुपर्छ । छाला भएको मासुमा बोसो र कोलेस्टेरोल धेरै हुन्छ । चिल्लोमा फ्राई गर्दा यो झन् हानिकारक बन्न पुग्छ । यसकारण बोसो, छाला नभएको मासु खाने प्रयास गर्नुपर्छ । उसिनेर वा रोस्ट गरेर पकाउँदा उत्तम हुन्छ । मासु खाँदा हरियो सागपात र सलादसँग खानुपर्छ ।
चाडपर्वका वेला रक्सी–मासु टन्न खाने चलन छ, जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ । चिल्लो पनि रक्सी पनि एकसाथ मिसिँदा मुटुको गति एकदम छिटो–छिटो बेतालसँग चल्ने हुन सक्छ । यसलाई ‘होलिडे हर्ट सिन्ड्रोम’ भनिन्छ ।
तेलजस्तै रक्सीबारे पनि जनमानसमा एउटा भ्रम छ– अलिकति पिउने ग¥यो भने मुटु बलियो हुन्छ । रक्सी पिउने चलन परापूर्वकालदेखिको हो । रक्सी नपिउने मानिस एक्लोजस्तै हुन्छ अनि रक्सी नराखिएको भोज खल्लोजस्तो हुन्छ । रक्सीमा ठूलो शक्ति छ, यसले मान्छेलाई पशु बनाउन सक्छ । साथै, मान्छेको शरीरका अंगहरुलाई क्षतविक्षत पार्न सक्छ । रक्सी थोरै खाए औषधि हुन्छ, धेरै खाए विष हुन्छ, ठिक्क मात्रामा लिँदा फाइदा गर्छ भन्ने बहाना बनाई रक्सी पिउने बानी बसाल्नु हुँदैन । रक्सीले रक्तचाप बढाउँछ, मस्तिष्काघात गराउँछ, हार्टफेल गराउँछ ।
चाडपर्वका वेला रक्सी–मासु टन्न खाने चलन छ, जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ । चिल्लो पनि रक्सी पनि एकसाथ मिसिँदा मुटुको गति एकदम छिटो–छिटो बेतालसँग चल्ने हुन सक्छ । यसलाई ‘होलिडे हर्ट सिन्ड्रोम’ भनिन्छ । यो अवस्था धेरैजसो चाडपर्वमा हुने भए पनि दसैँमा सबैभन्दा धेरै हुन्छ, किनकि खसीको कवाफ र रक्सी खाँदा मीठो हुन्छ, तर मुटुलाई भने क्षति गर्छ ।
चिल्लोपदार्थ, तेल, घिउ, रक्सी, मासु आदिका सम्बन्धमा के, कसरी र कति खाने भन्नेबारे जानकारी राखी स्वास्थ्यमा हानि नपुग्ने गरी उपभोग गर्नु सधैँका लागि उत्तम हुन्छ ।
Tags: डा. प्रकाशराज रेग्मी, मुटुरोग, रक्सी
न्युरोसर्जन डाक्टर राजीव झा : जसले चुँडिन लागेका हजाराैं जीवन जोडे
नेपालमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी, विभाग भन्छ– बिरामीको ज्यान तलमाथि भए जन्मकैद हुन्छ
नेता जोशीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्–अवस्था नाजुक छ, केही भन्न सकिन्न